Jawaabtii Cabdiwaaxid ee M.C. Xaashi iyo C. Yuusuf
Cabdiwaaxdi waxaa uu kahdlayay in Maxamed Cabdi Xaashi uu Cabdullaahi yuusuf kamudanyahay madaxtinimo somaliyeed.
Horta waxaan ka afeefanaayaa in Cabdulaahi Yuusuf iyo Maxadmed Cabdi Xaashi ay aniga agtayda isku qiimo kaleeyihiin oo jawaabtaani aysan ahayn inaan labadaas akhyaar u kala doodayo, laakiin ninka maqaalka qoray aayaa labadaas nin ee aniga isku qiimaha ila ah midkood aad been ugasheegay, waana taas sababta aan ugu jawaabayo.
Runtii markaan arkay mawduucaan waxan u fasirtay in Cabdiwaaxid uu reer Puntland qarkood isleeyahay ka raali geli hadalo hore oo uu qoray. Laakiin taasi waa fasiraadayda.
Haddii aan midmid uga jawaabo waxyaabihii uu Cabdiwaaxid uu qoray.
1- Cabdiwaaxid wuxuu yiri : “Cabdulaahi Yuusuf deeqsinimo iyo geesinimo midna malahan isagoo daliil kadhigtay in lacagta uu bixiyona ay tahay tii xeradda daraawiishta ee gaalkacyo.. iyo inaan Cabdullaahi cid shisheeye ladagaalamin”. Runtii Cabdiwaaxid inaan siyaasad waxba ka aqoon waxaa dadliil u ah waxa uu ku eedeeyey nin uusan aqoon badan u lahayn… noloshadaya ilaa kumanaan maqaalo oo siyaasadeed waan akhriyay oo luqado badan ku qoran oo dad kala duwan ay qoreen laakiin waligay maarag nin madaxweyne ah oo lagu eedaynao waa bakhiil illaa. Lacagtii xeraddii daraawiishtana adeer dadka ay taladu ka go’do ee reer gaalkacyood baa taas leh. Waxaa laga yaabaa in laga doodikaro qaabka loo iibiyay laakiin sidda lacagta loo isticmaalay taas waa arimo reer gaalkacyood u taal. Mana ahan arin cabdulaahi iyo deeqsinimadiisa loo daliishan karo. Arinta kale ee ah inaan cabdulaahi dad shisheeye ladagaalamin. Horta dad shisheeye inaad xadid baa fiicnaan lahayd laakiin bal aan shisheeyaha ! u kala qaadno Itoobia, Hawiye iyo Isaaq. Suaasha koowaad ee meesha imaankarta waxa weeye Cabdulaahi Itoobia maladagaalamay ? Suaashaas jawabteedda Maxamed Siyaad Barre oo aan filayo inuu kaaga aqoon badnaa kaana run badnaa aa bixiyay. Sanadkii 1981 ayaa Xeraddii shiirkolo ofishaale ee ciidamada waxaa kushiraayay saraakiishii ciidamdda Somalia kuwoodii ugu qabqablaysnaa, waxaa microfoonkii qabsaday nin sarkaal ah oo aad u caayay Cabdulaahi oo markaas Hogaaminayaya jabhaddii SSDF. Sarkaalkaas waxaa uu cabdulaahi yuusuf ku caayay ama ku seedeeyay “fulaynimo iyo khiyaano wadan iyo aqoon la’aan xagga ciidanka ah iyo waxayaabo kasii xun. Sarkalkaas jawaabtiisii waxaa siiyay Maxamed siyaad barre oo yiri “ intiinaan meesha fadhidda mid Cabdulaahi Yuusuf la karti ah ama la,aqoon ah ama kawadanisan idinkumajiro” maxamed siyaad barre intaas kuma ekaan ee waxa uu kasii faalooday Cabdulaahi heerkii uu kasoo qaatay dagaaladii amxaaradda. Maxamed Siyaad Barre hadalkiisii waxa uu ku soo ga! bagabeeyay isagoo kahadlaaya wadaninimada Cabdulaahi. “Itobia ! Cabdulaa hi Yuusuf ama way xiraysaa ama way dilaysaa ama wadankiisa ayuu u soo fakanayaa oo wuu noo imaandoonaa. Kadibna sacab baa lagu dhuftay. Su”aasha labaad ee ah cabdulaahi Yuusuf maladagaalamay Isaaq iyo Hawiye. Hawiye iyo isaaq Cabdulaahi somalinimona wuu ka raadiyay dagaalna wuu lagalay malaha Cabdiwaaxid goordhawayd dhashaye. Bilowgii 1990kii markii dagaalka b,aan uu kasocday Mudug waxaa loo marag ahaa in Cabdulaahi uu ahaa hogaamiyihii magaaldiisa lagu soo weeraray hubkii qaranka somaliyeed ee yaalay min gaalkacyo ilaa Kismaanyo in kabadan 22jeer dhawrjeer oo hore mooyee Cabdulaahi wuxuu ahaa ninka markasta hogaaminaayay dagaaladaas wuxuu ahaa Cabdullaahi yuusuf. Kii ugu xumaana wuxuu ahaa Dagaalkii Caydiid ugu yeeri jiray “dagaalkii jimacaha” Qaabkii iyo siddii u udhacyna waxay ahayd mid Caydiid uu uga quustay Gaalkacyo. Hubkii laga furtayna wali iyagoo sidiidii ah bay Xeradda Siinaay yaalaan waadna soo arki kartaa. Dhinaca Isaaqana magaaldda Laascaano bay ahayd meeshii la! gu caysraday Riyaale. Bini aadnkana sidiisaba waxa looga nabad galaa 2 arimood midkood inuu ku ixtramayo iyo inuu kaabaqayo Puntland manta ixraam loohayo uma aysan nabad galin ee Cabsi laga qabo ciidankeeda weeye odayaashii dhisay Puntlandna Cabdulaahi baa kamid ahaa. Hadaladaan faan aan Cabdulaahi faaninaayo igama ahan ee waa taariikhdiisii oo aan xoogaa kaxussay.
2- Tankale ee uu yiri Cabdulaahi baa si sharci daro ah ku qabsaday Puntland taas soo tii muranku kataagnaa laakiin cabdiwaaxid dhinaca uu yahay uun baa la saxsan. Sharciga Puntland qodobkiisa 32.4 ayaa waxaa uu dhigayay in Haddii dawladdu ay samayn waydo tirakoob kadibna doorasho nay taladu u noqonayso isimadda. Hadaba isimaddii waraaqo baa loo diray markii wakhtgii lagaaray qaarkoodna way kasoo jawaabeen qaarkalena sababo bay sheegteen iyagoo awood u lahaa in ay soo dirsadaan wakiilo. Kadibna isimaddii baaqday baa shir qabsaday oo yiri Cabdulaahi baan xukunkii kaqaadnay oo Jaamac cali Jaamac baan u dhiibanay. Taas oo keentay in dagaal dhaco oo Cabdulaahina uu wali madaxweyne yahay.
3- Waxuu yiri Cabdulaahi wuxuu dhaqalihi ku baxshay musharaxnimadiisa, waxaa fiicnaan lahayd marka aad eedayn noocaas ah sheegaysid inaad daliishatid wax lataaban karo, laakiin Cabdiwaaxid wax lataaban karo ma uusan keenin,bal kawaramma, Cabdiwaaxid Berri hadduu soo qoro Cabdulaahi lacagtii Puntland oo dhan wuxuu siiyay takhtarkii beerka kabadalay caruurtiisa iyo xaaskiisa oo puntland booqasho ku yimid, iyadoon wax caddayn ahi lasocon. Qofku in uu qofkale eedeeyo waa sahlantahay haddii aan cadayn lagarabin. Marka cabdiwaaxid waxaan kasugayaa inuu eedaynta lacagta uu kakeeno boono si hadalkiisu run ugu ekaado.
4- Waxa kale oo uu yiri Kismaanyo cabdulaahi iyo morgan wax natiijo ah kama keenin. Adeer horta aan hal arin ah kuu caddeeyo Cabdulaahi iyo Maxamed cabdi xaashi iyo Morgan isku mawqif bay kataaganyihiin arinka Kismaanyo oo ah in Magaladda kismaanyo ay tahay magaalo somaliyeed oo Harti uu kayahay qabiilka wayn ee maagaldaas dagga taladeedana ku leh qayb wayn. Shilinkasta oo Kismaanyo lagu bixiyayna waa mid ay 3 daas oday isku raaceen.
5- Tan ah in haddii aan taladada laraacin ay Puntland burburayso adeer somalidu waxay ku maahmaahdaa RIYO HADDAY DABO LEEYIHIIN FUTADOODAY KU QARSAN LAHAAYEEN taladaadu Jaamac Cali Jaamac bay wax tari lahayd.
Jaamac oo aad dooratay oo aad u ololayn jirtay bay taladaadu wax tari lahayd? Teedakale somalidu waxay tiraahaa doqoni dibir kama dharagto ilaa maalinkaad internetka magaacaga ku arkaayay cabdulaahi baad hadba cidda ay ishayaanna amanaysay Cidda ay is bahaystaana dhaleecaynaysay wax guul ah oo aad kugaartayna maarag. Cabdulaahi waligiis maanta maalin uu ka itaal roonayah masoo marin siyaasad ahaan. Wax kasta oo uu kasheegatayna been bay noqonjireen. Marka maxaa cusub oo lagu rumastaa hadalka cabdiwaaxid misse waa “doqoni dibir kam a dharagto”.
»Maxamed C. Xaashi ma madaxweyne ku-xigeen baa mise [C/Waxid]